पुरुषले महिला देख्नासाथ सबैभन्दा पहिले शरीरको कुन अंग बढी हेर्ने गर्छन् ? - Choicekhabar.com
पुरुषले महिला देख्नासाथ सबैभन्दा पहिले शरीरको कुन अंग बढी हेर्ने गर्छन् ?
Choicekhabar । २०७६ असार २, सोमबार ०७:५० मा प्रकाशित
प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेरपनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ ।
त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन ।विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छाती, कम्मर र उसको पछाडिको भाग (कम्मरभन्दा मुनि) लाई धेरैले नजर लगाउने गरेको पाइन्छ ।
हाम्रो नेपाली समाज होस् वा पश्चिमा या भारतीयहरू नै किन नहुन महिलाहरू आफ्नो छातीलाई आकर्षक देखाउन ज्यान छाडेको प्रष्टै देख्न पाइन्छ छाती मात्रै होइन कम्मर र पछाडिको भाग पनि महिलाहरूले सकेसम्म पुरुषले हेरिदेओस् भन्ने चाहना राख्छन् ।
९ दिनको छोरा काखी च्यापेर समाज परिवर्तनमा लागेकी भिमा !
यस्तो फाइदाका लागि मनाइन्छ जनैपूर्णिमा
यौन-सपना किन देखिन्छ ? कारण यस्ताे छ
आँखा फरफराउनुको कारण यस्तो छ । थाहा पाउनुहोस्
किन लगाइन्छ, विबाहमा साइँली औलामा औँठी ? कारण यस्तो छ
एनसेल वा एनटिसीमा फोन नलाग्दा “माफ गर्नुहोस्…” भन्ने यी दुई महिला को हुन् ? चिन्नुहोस्